အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာတဲ့ ကလေးတွေဟာ ဘာ့ကြောင့် ပိုမိုကျန်းမာကြတာလဲ? - Lifestyle Myanmar
Home General Knowledge အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာတဲ့ ကလေးတွေဟာ ဘာ့ကြောင့် ပိုမိုကျန်းမာကြတာလဲ?
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာတဲ့ ကလေးတွေဟာ ဘာ့ကြောင့် ပိုမိုကျန်းမာကြတာလဲ?
လူအများစုက သူတို့ကလေးတွေကို ကျန်းမာသန်စွမ်းစေဖို့ အစွန်းအထင်းမရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နေထိုင်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ထင်မြင်ကြပါတယ်။ သို့သော် အံ့သြစရာကောင်းတာကတော့ ဒါဟာ မမှန်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တိုိ့ အိမ်တွေမှာရှိတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို တိုးတတ်စေနိုင်တယ်လို့ လေ့လာမှုတစ်ချို့မှာ ပြသထားပါတယ်။ သုတေသနပြုချက်အရ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များဟာ ကလေးတွေရဲ့ ဘဝမှာ သေးငယ်တဲ့ ဇီဝသက်ရှိတွေကို မိတ်ဆက်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းထဲက တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြသထားပါတယ်။
၁။ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေက ကလေးတွေအတွက် ကိုယ်ခံအားကို မြှင့်တင်ပေးပါတယ်
အချက်အလက်များစွာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကို အကျိုးသက်ရောက်ပါတယ်။ တကယ်တော့ မိနစ် ၂၀ ရယ်မောခြင်းက ကလေးလိုအပ်နေတဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေကလည်း ကူညီနိုင်ပါတယ်။ မကြာသေးမီက လေ့လာမှုတစ်ခုအရ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့် ခဏတာ တွေ့ဆုံခြင်းက ပငကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်လုပ်ဆောင်မှုကို တိုးတတ်စေတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဥပမာ- ခွေးလေးတွေဟာ ကလေးငယ်တွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ပိုမိုအားကောင်းစေတဲ့ သဘာဝပိုးမွှားတွေကို ထိတွေ့စေပါတယ်။
၂။ ဓါတ်မတည့်ခြင်းနှင့် ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်က အန္တရာယ်ရှိသော ပစ္စည်းများနှင့် အဏုဇီဝသက်ရှိများကို လွန်စွာတုံ့ပြန်တဲ့အခါ ဓါတ်မတည့်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ လူအများစုက အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များကို ရှောင်ခြင်းဟာ ဓါတ်မတည့်မှုကို လျော့နည်းစေတယ်လို့ ထင်ကြပါလိမ့်မယ်။ သို့သော် ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်လို့ ကလေးဟာ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်နဲ့ တစ်နှစ်လောက် အတူနေမယ်ဆိုရင် အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဓါတ်မတည့်မှုဖြစ်နိုင်ခြေကို နည်းစေပါတယ်။
ကြက်၊ ဝက်၊ ကျွဲ၊ နွားစတဲ့ တိရိစ္ဆာန်ခြံဘေးမှာ ကြီးပြင်းတဲ့ ကလေးတွေဟာ ဓါတ်မတည့်မှု ရာခိုင်နှုန်း နိမ့်ကျကြောင်း ဒီလေ့လာမှုက တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါဟာ ထိုအုပ်စုမှာ ဖြစ်ခဲပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုမှ ာတွေ့ရတာကတော့ ကြောင်နှင့်အတူ နေထိုင်တဲ့ ကလေးတွေဟာ ပန်းနာရင်ကျပ်နှင့် အခြားအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများ နိမ့်ကျနိုင်တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
၃။ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ရှိတဲ့ သူတွေဟာ ပိုပြီးကြံ့ခိုင်ပါတယ်
ခွေးတစ်ကောင်လို အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် ရှိခြင်းက လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖြစ်စေဖို့ အခွင့်အလမ်းများစွာ ပေးပါတယ်။ ခွေးနှင့်အတူ လမ်းလျှောက်တာဖြစ်ဖြစ် ၊ အိမ်နောက်ဖေးမှာ ကစားတာပဲဖြစ်ဖြစ် ကလေးတွေကို ကျန်းကျန်းမာမာဖြစ်စေဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ လူပေါင်း ၂၀၀၀ကျော်ကို စမ်းသပ်ခဲ့တဲ့ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ခွေးနဲ့ ပုံမှန်လမ်းလျှောက်သူများဟာ ကြံ့ခိုင်မှု အားကောင်းပါတယ်။ ကလေးတွေကို နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းများများ ပြုလုပ်လိုပါက အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင် ရှိထားခြင်းဟာ ပြီးပြည့်စုံသော ဖြေရှင်းနည်းဖြစ်ပါတယ်။
၄။ စိတ်ဖိစီးမှုကို သက်သာစေပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အသက်အငယ်ဆုံး အဖွဲ့ဝင်တွေတောင် နေ့စဉ် စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ခံစားကြရပါတယ်။ သို့သော် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများနှင့် မတူဘဲ သူတို့ဟာ ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာ မသိကြပါဘူး။ ဒီလေ့လာမှုအရ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ထိတွေ့မှုက ကော်တီဇုန် စိတ်ဖိစီးမှု ဟော်မုန်းနဲ့ နှလုံးခုန်နှုန်းကို လျော့ကျစေပါတယ်။ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များကို ကုထုံးတွေမှာ မကြာခဏ အသုံးပြုလေ့ ရှိကြပါတယ်။
၅။ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေဟာ အော်တစ်ဇင်ရှိတဲ့ ကလေးတွေအတွက် လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုကို တိုးတတ်စေပါတယ်
ASD ရှိသော ကလေးမိဘတွေအနေနဲ့ လူမှုရေးအခြေအနေတွေမှာ သူတို့အတွက် ဘယ်လောက်ခက်ခဲကြောင်း သိကြပါတယ်။ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ထားပေးခြင်းက အော်တစ်ဇင်ကလေးတွေကို လုံခြုံမှုခံစားရစေပါတယ်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ အော်တစ်ဇင်ကလေးတွေဟာ သတ္တဝါများရောက်ရှိချိန်တွင် ရွယ်တူချင်းနှင့်အတူ ပိုစကားပြောကြပါတယ်။
သင့်ကလေးပတ်ဝန်းကျင်မှာ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ရှိခြင်းနှင့် ပတ်သတ်ပြီး သင်ဘယ်လို ထင်ပါသလဲ? သင့်ကလေး ကျန်းမာအောင် ကူညီပေးနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါသလား? ထင်မြင်ချက်လေးတွေ မျှဝေပေးပါဦးနော်။
Previous articleခရီးသည်တွေရဲ့ ဘယ်လိုအမူအယာတွေကို လေယာဥ်မောင်/မယ်တွေက သတိထားလေ့ရှိသလဲ
Next articleအသက်ကြီးလာတဲ့အခါ မိဘအများစုနောင်တရတတ်ကြတဲ့ အမှား(၈)ခု